Safal Khabar - कुकुरले टोकेको नभन्दा ज्यान गयो
शनिबार, २८ मङि्सर २०७६ (Saturday, 14 December, 2019)
बिहिबार, ३० साउन २०७६, ०७ : ०८
ललितपुर । कुकुरले टोकेको कुरा लुकाउँदा ललितपुरमा एक किशोरीको मृत्यु भएको छ। गोदावरी नगरपालिका–६ स्थित नेपाल असहाय बाल घरमा बस्दै आएकी १७ वर्षीया कनिषा अर्यालको साउन १९ गते मृत्यु भएको हो। सिन्धुपाल्चोक मेलम्चीकी उनी १२ कक्षामा पढ्थिन्।
गेलालका अनुसार दुखाइ कम नभएपछि उनलाई १७ गते मेडिसिटी अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। अस्पताल लैजाँदा रेबिजको लक्षण देखिन थालेको थियो। बाटोमा गाडीको सिसाबाट हावा छिर्दा डराउन थालिन्। बाथरुममा पानी खोल्दा पनि डराउन थालिन्। गेलालले भने, ‘रेबिजका बिरामीमा वाटरफोयिबा, एरोफोबियाको समस्या हुन्छ। उनीहरू पानी र हावाबाट डराउँछन्।’
मेडिसिटीमा पुगेपछि डाक्टरले समस्या बुझ्दै जाँदा उनले कुकुरले टोकेको कुरा सुनाएकी थिइन्। त्यसपछि उनलाई टेकु लगिएको थियो। समस्या विकराल भइसकेकाले उनको उपचार हुन नसकेको गेलालले बताए। उनले आफूसँगै बस्ने साथी र होस्टल वार्डेनलाई समेत उक्त घटना नबताएका कारण समस्या भएको गेलालले बताए। यसै विषयमा अनुसन्धान गर्न जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको टोली बुधबार घटनास्थल पुगेको थियो।
रेबिज लागिसकेपछि बिरामीको श्वासप्रश्वासमा समस्या हुन्छ। पानी निल्न कठिन हुन्छ। ‘पानी देख्नेबित्तिकै घाँटीको नसा खुम्चिन्छ’, गेलालले भने, ‘हावा चल्दा पनि डराउँछन्।’ उक्त संस्थाका अन्य बालबालिकालाई पनि रेबिजविरुद्धको सुई लगाइसकेको अनुगमन क्रममा भेटिएको उनले बताए।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएका कारण कनिषा र उनका भाइ उक्त संस्थामा बसिरहेका थिए। एसईईमा ग्रेड ए ल्याएकी उनी जेहेन्दार र लगनशील थिइन्। भाइलाई कुकुरले टोक्दा टेकुमा पर्‍याएर सुई लगाएकी उनले आफूलाई कुकुरले टोकेको कुरा भने ढाँटेकी थिइन्।
कुकुर वा बाँदरले टोक्यो भने रेबिजको कीटाणु उनीहरूको र्‍यालबाट सर्छ। नसाबाट शरीरमा रेबिजका भाइरस पस्छन्। एकदमै मन्द गतिमा सर्छ। तर, दिमागमा पुगेपछि बिरामीको मृत्यु हुन्छ। खुट्टामा टोकेको हो भने त्यो सरेर दिमागमा पुग्न समय लाग्छ। तर, घाँटीमा टोकेको हो भने छिट्टै दिमागमा पुग्छ। एन्टिरेबिज सुईले यसलाई रोक्न सक्छ। रेबिज प्राणघातक रोग भएकाले लक्षण देखिइसकेपछि उपचार सम्भव हुँदैन। कुकुरले टोक्नेबित्तिकै धाराबाट बगिरहेको पानीमा राम्ररी पखाल्नुपर्छ। साबुनपानीले र्‍याल पखाल्दा जान सक्छ। तातोपानीले राम्रोसँग केही मिनेटसम्म धोए पनि किशोरीको ज्यान बच्न सक्छ। यो समाचार आजको अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
४० हजार रुपैयाँमा मा नेपाल भित्रन्छन् ‘रोहिंग्या’
कोहलपुरमा डीएसपी शाहीसहित ९ प्रहरी घाइते, कर्फ्यु लगाउने तयारी
१. बक्सिङका स्वर्ण पदकधारीलाई थप चार लाख
२. सुतेकै अवस्थामा मृत भेटिए कलाकार दीपक क्षेत्री
३. के तपाईंलाई जाडोमा सताउँछ दमले ?
४. एउटाको अपराधको सजाय अर्कोलाई नदिन माग
५. पत्रकार प्रविण बराललाई पितृ शोक
६. क्यालिफोनिर्याका तटमा देखिए यस्ता जीव
७. आन्दोलन स्थगित गर्न विद्यार्थीहरुलाई सिएमसीको आग्रह
८. नारायणी किनारलाई पर्यटकीय केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक
९. पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानका भतिजाको खोजी
२. ४० हजार रुपैयाँमा मा नेपाल भित्रन्छन् ‘रोहिंग्या’
३. कोहलपुरमा डीएसपी शाहीसहित ९ प्रहरी घाइते, कर्फ्यु लगाउने तयारी
४. उपनिर्वाचनमा चरम अन्तर्घात : पूर्वमाओवादीलाई छानीछानी हराइयो
५. राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपालाई फाईदैफाईदा
६. राजधानीमा भूकम्पको धक्का
७. सागले खोस्यो जीवन, गयो बालकको ज्यान